रिप ड्याड, यु वेन्ट योङ्ग ड्याड् « Rara Pati
रिप ड्याड, यु वेन्ट योङ्ग ड्याड्
मेरो जेठो छोरा निरेश राज जोशीको महाप्रस्थान भएको सात बर्ष भयो । श्रावण २० गते २०७१ सालमा दुबईमा मेरो छोराले यो संसार छोडेको हो । त्यो पिडाबाट म उम्कन सकेको छैन । प्रत्यक दिन कुनै न कुनै प्रसंगले मलाई रुवाउँछ । हाम्रो परम्परा अनुसार प्रति बर्ष त्यही तिथी मितिमा मन्दिरमा गएर वा ब्राहमणलाई बोलाएर सिधा दिन्छौँ र गोदान गर्छौ । श्राद्ध गर्ने उमेर नातीको पुगेको छैन ।
यो बर्ष पनि मेरा बुढा बुढी मैतीदेवी मन्दिरमा गएर सिधा दिएर आयौँ । कुन मनोविज्ञानले हो कुन्नी मेरो नाती पुजागरेको रातो टिका लगाउन मान्दैन । धेरै कर गर्न पर्छ । भगवानले मेरो बाबालाई किन बचाएन भन्ने पो उसको मनमा लागेको छ कि ।
यो पाली पनि पहेंलो टिका लगाउँदैन कि भनी मैले मनमनै डर मानेको थिएँ । उसलाई मनाउने मनसायले मैले पहिले नै भनेः नाती आज तिम्रो बाबा वितेको सात बर्ष भयो, हामी मन्दिर गएर आयौँ । भोलि तिमी ठुलो भएपछि तिमीले श्राद्ध गर्न पर्छ, यो टिका लगाउ । उसले कुनै आपत्ति जनाएन । टिका ग्रहण गर्यो ।
एक छिन निश्चल भएर टोलायो नत्र ऊ चटपट गरिराख्छ । के के सोच्यो । मसँग पनि बोलेन । निर्निमेष कतै टाढा छितिजमा हेरीरह्यो । मैले पनि उसको अन्यमनस्कतालाई विजाइन । ऊ केही बेर त्यतिकै बसीरह्यो ।
अलिछिन पछि ऊ उठेर आफ्नो कोठामा गयो । के के गर्यो अनि मलाई बोलायोः बुवा यता आउनुहोस मलाई हेल्प गर्नुहोस् । म उसको कोठामा पुग्दा उसले लेटरको स्पेलींग सोध्यो अंग्रेजीमा । अनि एउटा कागजको चिर्कोमा लेटर लेख्यो । उसले कागजको एउटा हवाइ जहाज बनाएको रहेछ । त्यसमा त्यो लेटर लेखेको चिर्को राख्यो, चिर्कोमा उसले रिप ड्याड् भनि लेखेको थियो ।अनि त्यो लेटर लेखेको चिर्कोमा थप्योः इट इज टु यु , सि इट , यु वेन्ट योंग ड्याड् लेखेको कागजको प्लेन उडाउन भनेर बारादलीमा आयो र फेरि के सोचेर हो सायद त्यो चिठ्ठि हराउँछ भनि हो कि ग्लू खोज्न थाल्यो । ग्लूले त्यो चिर्को प्लेनसँग चिप्कायो । उडाउनु भन्दा अगाडि मलाई फेरि उडाउँ कि भनी सोध्यो । मैले किन पो हो, ठुलो भयपछि उडाउनु अहिले सुरक्षित राख, भने ।
उसको मनमा लागेको छ उसको बाबा कतै माथि आकासमा छ । प्लेनमा चिठ्ठि पठायो भने पाउने छ । पहिले पनि पटक पटक सोध्थ्यो मेरो बाबासँग टेलिफोनमा कुरा गर्न सकिदैन बुवा ? मलाई बाबासँग कुरा गर्न मन लागेको छ । मसँग त्यसको जबाफमा आँसु मात्र थिए । त्यो रहर उसले अहिलेसम्म पालेको छ ।
उसले त्यो चिठ्ठि उसको सेक्रेट बाकसमा राखेको छ । उसले आफ्नो एउटा सेक्रेट बाकस बनाएको छ ।
दश बजे उसको अनलाइन कक्षा सुरु भएको छ । ऊ आफ्नो ट्याब खोलेर बसेको छ । मैले बुझीरहेको छु उसको मन कक्षामा लागेको छैन । उसको दिमागमा उसको बाबा नै नाची रहेको छ ।घरी टोलाउँछ घरी मेरो मुखमा हेर्छ । केही सोध्न खोजे जस्तो तर सोध्दैन । अलि पछि आँट गरेर सोध्छः बुवा जुन बच्चा बच्चिको आमा बा वितेका हुन्छन् तिनीहरुको आत्मा भूत बनेर आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्न आउँछन् होइन ? दिउसो नाई कि राती ।
उसलाई लागेको होला सायद उसको बाबा उसलाई हेर्न आउँछ कि नाई भनी ।
मैले भनेः भूत बनेर त आउँदैनन् केर तर आत्मा त घुमी राख्छ भन्छन् ,सायद आत्माले हेर्छन् होला आफ्ना छोराछोरीलाई । उसको ध्यान उसको ट्याबमा आइरहेको उसको टिचरको आवाजतिर पटक्कै थिएन, उ अरुनै केही सोची रहेको थियो । केही छिन पछि उसले आफ्नो कक्षा कार्यको कापिको सिरानमा केही लेख्यो, सायद उसले आवाजमा भन्न नसकेर होला, उसले अंग्रेजीमा लेखेको थियोः बाबा पनि ।उसको मनसाय उसको बाबा पनि राती ऊ सुतेको बेला उसलाई हेर्न आउँछ कि भन्ने थियो केर ।
मैले आफूलाई रोक्न सकेन । मेरा आँखा डलबलाउन थाले । उसले मलाई हेरी रहेको थियो । उसका आँखामा पनि आँसु भरिएका थिए । म पनि र ऊ पनि केही बोल्न सकिरहेका थिएनौँ ।
ऊ आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठ्यो । कहाँ जान्छ भनी म विचार गर्दै थिएँ ,कोठामा नै एक दुई फन्का घूम्यो अनि एकाएक आएर मलाई अँगालो हाल्यो, धेरै बेरसम्म मसँग टाँसि रह्यो । मैले उसलाई मुसारी राखें, उसले अँगालो नछोडेसम्म ।
कति बेदना पालेको छ उसले मनमा । सानै उमेरमा आफ्ना प्रियजनहरु गुमाएका सानासाना नानीहरुको मनोविज्ञान यस्तै हुन्छ रे ।
धेरै बेर पछि उसले मलाई सोध्यो, धेरै रुनुभयो हैन बुवा, हुन त ऊ पनि रोएको थियो ।
(राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा दैलेख जिल्लाका वरिष्ठ वाम नेता रंगनाथ जोशी ज्यूका छोरा निरेश राज जोशीको सात वर्ष अघि अल्पायुमै दिवंगत भएको पुण्य तिथिको सन्दर्भ पारेर लेखेको फेसबुक संस्मरणमा बाबु गुमाएका वहाँका नातीको वाल मनोविज्ञान निकै मर्मस्पर्शी छ । त्यसमाथि लाउला खाउला भन्ने जोवनको छोरा गुमाउनु पर्दाको जोशी सरको मनको वेदना छचल्किएको छ । निरेश राज जोशीप्रति श्रदाञ्जली, जोशी सर र वहाँको परिवार प्रति रारापाटी टिमको समवेदना ब्यक्त गर्दैं यो भावनात्मक आलेखलाई साभार गरेका छौं। )